भंसाली र आलियाको ‘गंगुबाई’ - Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live
भंसाली र आलियाको ‘गंगुबाई’
गंगुबाई कोतवाली किन बनिन भंसालीको बायोपिक विषय ?
शुरु हुनु अघि नै सलमान खान र आलिया भट्टको इनशाल्लाह रोकिए पछि निर्देशक संजयलीला भंसालीले आलियालाइ लिएर छुट्टै फिल्म बनाउने भएका छन् । मुम्बईकी प्रख्यात वेश्यालय संचालिका गंगुवाइ कोतवालीको जीवनीलाइ सिनेमामा उतार्ने तयारी गरिरहेका भंसालीले ‘गंगुवाई’नामको यो फिल्मकालागि आलियाको चयन गरेको भारतीय संचारमाध्यममा खबर बाहिरिएको छ । यसअघि प्रियंका चोपडालाइ अफर गरिएको थियो । प्रियंकाको व्यस्तताका कारण उनले यो फिल्मलाइ समय दिन सकिनन । आलियासँग इनशाल्लाहको समय खाली थियो ।
खबर अनुसार भंसाली फिल्मको प्रि–प्रोडक्सन, संगीत र कथावस्तुलाइ अन्तिम रुप दिन लागिपरेका छन् । आलियालाइ विषयवस्तुको सार बताइसकिएको छ । भंसालीले औपचारिक घोषणा गर्नकालागि शुभ समय पर्खिरहेका छन् । संभवत २८ सेप्टेम्बर पछि यसको औपचारिक घोषणा गरिने छ । अक्टोबरको मध्यबाट फिल्मको शुटिंग शुरु भएर फेब्रुअरीसम्मा सकिने लक्ष्य राखिएको छ । फिल्मको विषयवस्तु एस हुसैन जैदीको ‘माफिया क्विन्स अफ मुम्बई’को एउटा अध्यायबाट उठाइएको बुझिएको छ ।
गंगुवाइ कोतवाली किन बनिन भंसालीको बायोपिक विषय ?
मुम्बइको वेश्यावृतिको बजारमा सम्मानका साथ लिइने नाम हो गंगुवाइ कोतवाली । गंगुवाइ कोतवाली, मुम्बइको रेडलाइट एरिया कामठीपुराकी प्रख्यात यौनकर्मी(वेश्या) थिइन् । जो पछि यो एरियाकी प्रख्यात दलाल, वेश्यालय संचालिका र कुख्यात गैंगस्टर पनि बनिन । यो एरियामा उनको राज चल्थ्यो । सानै उमेरमा धोकाले मुम्बइको बजारमा बेचिन पुगेकी गंगुवाई पनि वेश्यावृतिकालागि मजबुर पारिएकी युवती थिइन । कालान्तरमा उनले मुम्बईका सभ्य इलाकाहरुमा ठूलो यौन व्यापार संचालन गरेकी थिइन् ।
मैडम नामले बोलाइने गंगुबाईको दबदबा र लोकप्रियता यति धेरै थियो कि तात्कालिन प्रधामन्त्री जवाहरलाल नेहरु पनि उनको अगाडि हारेका थिए । आफनो कार्यकालमा नेहरुले मुम्बईबाट रेडलाइट एरिया हटाउने निर्णय गरेका थिए । उनको यो निर्णयको विरोधमा त्यहाँका यौनकर्मीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनको नेतृत्व गंगुवाईले गरेकी थिइन् । नेहरुले उनलाइ कुराकानीकालगि दिल्ली बोलाएका थिए ।
नेहरुलाइ भेटेर निडरताका साथ गंगुवाईले स्पष्ट कुरा राखिन । उनले यो बजारलाइ किन जोगाउनुपर्ने भन्ने तर्क राखेकी थिइन । यौनकर्मीहरुकालागि यो पेशा भएको र त्यसलाइ संचालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले यो बजारलाइ जोगाउन नेहरु समक्ष तर्क राखेकी थिइन । पछि नेहरुले निर्णय फिर्ता लिएका थिए । जसले गर्दा यो एरियामा स्वेच्छाले काम गर्न पाउने वेश्याहरुको अधिकार स्थापित भयो ।
भंसालीले यही विषयवस्तुमा ‘हीरामण्डी’ नामको वेवसिरिज पनि निर्माण गर्दैछन भन्ने खबर बाहिरिएको थियो । जसको कथालेखनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र वर्षको अन्तिममा शुटिंगकालागि फ्लोरमा जाने खबर भारतीय संचारमाध्यमहरुमा आएको छ।
Previous नयाँ दिल्लीको जन्तर मन्तरमा संविधानको विरोध
Next नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन दिल्लीमा छलफल